ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများသည် ဗမာစကားနှင့်ဆက်စပ်ဘာသာစကားများဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာဘာသာစကား၊ ရခိုင်ဘာသာစကားနှင့် အခြားဗမာဒေသိယစကားများဖြစ်သော ထားဝယ်စကား စသည်တို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတို့တွင်ပြောဆိုသုံးနှုန်းပြီး စာအရေးအသားစနစ်မရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြစ်သော မိုင်းသာစကား၊ မရူစကား၊ လရှီစကား နှင့် ဇိုင်ဝါးစကားတို့လည်းပါဝင်သည်။
Ethnologue.com တွင်ဖော်ပြထားချက်အရသိရှိရသော ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများအား မိခင်ဘာသာအဖြစ်ပြောဆိုသူနှင့် အခြား တရုတ်-တိဗက်နွယ်ဘာသာစကားများအားပြောဆိုသူ အရေအတွက်အား ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြထားသည့်ပုံ
၂.၁ လာမာ (၂၀၁၂)
၂.၂ နိရှိ (၁၉၉၉)
၂.၃ ဘရက်ဒလေ (၁၉၉၇)
ဗမာနွယ်ဘာသာစကားအုပ်စုဝင်တို့ကို ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးမှ အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ (ဘရက်ဒလေ ၁၉၉၇)
လော်ဝေါ် မရူ မရူ Làngsù 浪速
ဇိုင်ဝါး အဇီး ဇီး Zǎiwǎ 载瓦
လချိတ် လရှီ လရှီ Lāqí 喇期, Lèqí 勒期
Ngochang - မိုင်းသာ Āchāng 阿昌
ဇိုင်ဝါး(တရုတ်အခေါ် Xiaoshan 小山)၊ လော်ဝေါ်(တရုတ်အခေါ် Lang'e 浪峨)၊ လချိတ်(တရုတ်အခေါ် Chashan 茶山) နှင့် Pela လူမျိုးစုတို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုမျိုးနွယ်များအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီး ဂျိန်ဖော့လူမျိုးစုအတွင်းတွင် ပါဝင်သည်။ တရုတ်တို့က ဂျိန်းဖောမျိုးနွယ်စုအားလုံးကို စုပေါင်း၍ Dashan 大山 ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ဂျိန်ဖော့၊ ဇိုင်ဝါ၊ လော်ဝေါ်၊ လချိတ်စသည့် မျိုးနွယ်စုတို့သည် ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့တွင်ပါဝင်ကာ မိုင်းသာလူမျိုးမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့တွင်ပါဝင်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင်အပါအဝင်ဖြစ်ကြသည်။
ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဘာသာစကားများ၏ အသံအနိမ့်အမြင့် (တက်ကျသံ) အပေါ်မူတည်၍ လာမာ (၂၀၁၂) က အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။
နိရှိ (၁၉၉၉) က ဗမာနွယ်ဘာသာစကားတို့၏ အကြိုရှေးဦးဘာသာစကားဖြစ်သော Proto-Burmish ၏ တိုင်ဖြင့်နှင့်စသောစကားလုံးအသုံးအနှုန်းများမှ ယနေ့ခေတ်ဗမာနွယ်ဘာသာစကားအသီးသီးတို့တွင် ပြောင်းလဲလာပုံအပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ဗမာအုပ်စုနှင့် မရူအုပ်စုဟူ၍ အုပ်စုနှစ်ခုခွဲခြားထားသည်။ ဗမာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောဘာသာစကားများမှာ ဗမာစကား၊ မိုင်းသာစကားနှင့် ယူနန်ပြည်နယ် တယ်ဟုန်ခရိုင်တွင်နေထိုင်သော လူဦးရေ ၁၀၀ ခန့်ကသာပြောဆိုကြသော ရှန်းတောင်စကားတို့ဖြစ်ကြသည်။ မရူအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောဘာသာစကားများမှာ အဇီး(ဇိုင်ဝါး)၊ လရှီ(လချိတ်)၊ မရူ၊ နှင့် Pela စကားတို့ဖြစ်ကြသည်။
ရခိုင်စကားတွင် ရ နှင့် ယ တို့သည် အသံမတူညီသော ဗျည်းအက္ခရာများဖြစ်ကြသော်လည်း ဗမာစကားတွင်မူ ထိုဗျည်းနှစ်ခုစလုံးသည် ယ ဗျည်းသံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရောနှောသွားခဲ့ပြီး အခြားဗမာအုပ်စုဝင်ဘာသာစကားအများစုသည်လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။ ထားဝယ်စကားတွင်မူ ကျောင်း ကို က္လောင်း၊ မြေ ကို မ္လေ စသည်ဖြင့် လဆွဲသံများကို ယနေ့အချိန်အထိ တွေ့ရှိနိုင်သေးသည်။ ရှေးမြန်မာစကားတွင် တွေ့ရှိရသော ယပင့်နှင့် ရရစ် ဗျည်းတွဲကိုမူ ဗမာအုပ်စုဝင်မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မှ မတွေ့ရတော့ပေ။ ဘိတ်စကားမှာမူ မြန်မာဒေသိယစကားများတွင် လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်နိုင်သေးသည့် ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗမာစကား (ရုံးသုံးမြန်မာဘာသာနှင့် ရခိုင်ဘာသာစကား စသည်တို့ ပါဝင်သည်)
မိုင်းသာစကား (Huang et al. 1992, Wannemacher 1995-7)
ရှန်းတောင်စကား (Huang et al. 1992)
ဇိုင်ဝါး(အဇီး) (Burling 1967, Dai 1981, Yabu 1982, Xu and Xu 1984, Luce 1985: Charts S, T, V; Dai 1986, Huang et al. 1992, Wannemacher 1995-7, Wannemacher 1998)
လရှီစကား (Luce 1985: Charts S, T, V; Huang et al. 1992; Wannemacher 1995-7)
မရူ(လော်ဝေါ်) (Clerk 1911, Burling 1967, Luce 1985: Charts S, T, V; Okell 1988; Dai et al.: 1991; Huang et al. 1992; Wannemacher 1995-7)
ဒေးဗဒ် ဘရက်ဒလေ က ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတွင်ပြောဆိုသည့် ပြောက်ကွယ်လုနီးနီး လိုလို-ဗမာအုပ်စုဝင်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သော ဥဂွန်စကားကို လိုလိုနွယ်အုပ်စုတွင်မထည့်သွင်းပဲ ဗမာနွယ်အုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
လရှီ၊ မိုင်းသာ၊ ဖော်လာ၊ ရှန်းတောင်
↑ Dai Qingxia (2005).
Bernot, D. (1965). "The vowel systems of Arakanese and ." Lingua 15: 463-474.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများ&oldid=700352" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။